मेरो भिसा नम्बर के हो? हामी तपाइँलाई यो कसरी फेला पार्ने बताउँछौं यात्रा समाचार
मोनिका सान्चेज | | सुझावहरू
यदि तपाइँ एक देश को यात्रा मा जाने योजना बनाउनु भयो भने, तपाइँलाई सम्भवत: चाहिन्छ भिसा। यो पहिलेको गन्तव्यको देशले यसको कन्सुलेट वा मूल देशको दूतावास मार्फत प्रदान गरेको अनुमति हो। त्यहाँ भिसाका बिभिन्न प्रकार हुन्छन्, र यो निर्भर गर्दछ कि तपाई कहिले सम्म रहन चाहानुहुन्छ, एक वा अर्को छनौट गरेर।
यस लेखमा हामी वर्णन गर्नेछौं कहाँ र कसरी तपाइँले यसलाई अनुरोध गर्नुपर्दछ, र हामी तपाईंलाई तपाईंको भिसा नम्बर फेला पार्न मद्दत गर्दछौं। यो नछुटाउ।
1 भिसा वा भिसा, यात्रा गर्नका लागि आवश्यक कागजात
2 भिसाका लागि आवेदन दिनको लागि आवश्यकताहरू
3 भिसा प्रकारहरु
4 कुन देशहरू छन् जसलाई स्पेनी नागरिकको लागि भिसा चाहिन्छ?
5 टुरिस्ट भिसाका लागि कसरी आवेदन दिने?
6 के उनीहरूले मलाई भिसा दिन अस्वीकार गर्न सक्दछन्?
7 भिसा प्रक्रिया गर्न कति समय लाग्छ?
8 मेरो भिसा नम्बर के हो?
भिसा वा भिसा, यात्रा गर्नका लागि आवश्यक कागजात
भिसा भनेको कागजात हो जुन पासपोर्टसँग जोडिएको छ अधिकारीहरूले दर्साउँदछ कि कागजात जाँच गरीएको छ र मान्य भएको छ। यो धेरै देशहरूमा यसलाई लगाउन अनिवार्य छ। उदाहरण को लागी, संयुक्त राज्य अमेरिका मा, तपाईं केहि दिन बिताउन लाग्नुभएको छ वा तपाईं त्यहाँ बस्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं यसलाई आफूसँगै लैजानु पर्छ, अन्यथा एयरपोर्टमा तिनीहरूले तपाईंलाई मूलमा फर्काउँनेछन्।
भिसाका लागि आवेदन दिनको लागि आवश्यकताहरू
मात्र आवश्यकता छ रहनु 90 दिन भन्दा लामो हुनु पर्छ (तीन महिना)।
सामान्यतया, भिसा दुई प्रकारका हुन्छन्:
रहनुहोस्: यो एक तपाईंले अनुरोध गर्नु पर्छ यदि तपाईं यात्रामा वा अध्ययनको लागि आउनुभयो भने यो एक हुनेछ।
निवास: यदि तपाईं काममा आउनुभयो (स्व-रोजगारदाता वा रोजगारीमा) वा बस्न र बाँच्न।
तर देश र तपाइँ यात्रा गर्दै कारणमा निर्भर गर्दै, त्यहाँ केहि बढि छन्:
कूटनीतिज्ञहरू, अधिकारीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र नाटोका कर्मचारीहरू
कुन देशहरू छन् जसलाई स्पेनी नागरिकको लागि भिसा चाहिन्छ?
यदि तपाईं स्पेनिश हुनुहुन्छ र तपाईं यी कुनै पनि देशमा यात्रा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, संयुक्त राज्य अमेरिका बाहेक, तपाईंले भिसाका लागि आवेदन दिन आवश्यक छ:
टुरिस्ट भिसाका लागि कसरी आवेदन दिने?
पर्यटक भिसा, B2 को रूपमा पनि चिनिन्छ, यो कागजात हो जुन तपाईले देश भ्रमण गर्नुपर्नेछ। यसले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ भ्रमण, परिवार वा साथीहरू भेट्न, वा चिकित्सा उपचार को लागी; यसको सट्टामा, तपाइँ यसलाई काम गर्न प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुने छैन। यदि अध्यागमनले पत्ता लगायो भने, तिनीहरूले तपाईंको भिसा रद्द गर्न सक्दछन्।
यो एक आप्रवासी भिसा हो, जसको मतलब यो हो कि सिद्धान्तमा तपाईले स्थायी रूपमा देशमा बस्न चाहानु हुन्न। यदि अन्तमा तपाईं आफ्नो सोच बदल्नुहुन्छ, तपाईंले सम्बन्धित भिसाका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ.
यो अनुरोध गर्न, तपाईको मूल देशको गन्तव्य देशको दूतावास वा वाणिज्य दूतावास जानु पर्छ। आफ्नो अनुहार र तपाईंको राहदानी देखाउँदै आफैको फोटो लिनुहोस्। क्रेडिट कार्ड लिन पनि यसले चोट पुर्‍याउँदैन किनकि धेरै केसहरूमा तपाईले शुल्क तिर्नु पर्छ।
के उनीहरूले मलाई भिसा दिन अस्वीकार गर्न सक्दछन्?
यो दुर्लभ छ, तर यो वास्तवमै प्रत्येक केसमा निर्भर गर्दछ। यसलाई रोक्नको लागि, वाणिज्य दूतावासका अधिकारीलाई विश्वस्त पार्ने प्रयास गर्नुहोस् कि, पहिले, तपाईं बस्न र बाँच्न को योजना छैन र, दोस्रो, कि तपाईंसँग पर्याप्त स्रोतहरू छन्। यस कारणका लागि, तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कि यदि तपाईंले निवास कार्डको लागि आवेदन गर्नुभएको छ र भिसाको लागि सोध्नुभयो भने, सम्भवतः उनीहरूले तपाईंलाई एक दिएका छैनन्।
भिसा प्रक्रिया गर्न कति समय लाग्छ?
यदि तपाईं हातले सबै डेलिभर गर्नुहुन्छ र आवश्यक कागजातहरू सहि छन् कि बाहिर जान्छ भने, यो सामान्य रूपमा भन्दा बढि लिन्छ पाँच व्यापार दिन। यो धेरै छैन, र तपाइँ यसको यात्रा योजना बनाउन यसको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ।
एकचोटि तपाईसँग यो भएपछि तपाई सायद आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ कि भिसा नम्बर के हो किनभने यी कार्डहरूसँग एक छ संख्याको ठूलो संख्या यसको आफ्नै विशेषताहरू छन्, त्यसैले हामी यसलाई कसरी चाँडो चिन्न सक्छौं हेरौं।
कागजातमा भिसा नम्बर खोज्नको लागि हामीसँग यो केवल हाम्रो हातमा हुनुपर्दछ र यसलाई अगाडिबाट देख्न सक्षम हुनुपर्नेछ। यस तरीकाले, हामी केवल तल्लो दायाँ भागमा रातो जानकारीको समीक्षा गर्नुपर्दछ, निश्चित रूपमा संख्याहरूको श्रृंखला जुन यी विशेषताहरू हाम्रो लामो-प्रतीक्षित भिसा संख्या प्रस्तुत गर्दछ।
के तपाईंले यो स्थित गर्नुभयो? अब तपाईंले भर्खरै गर्नु पर्छ भिसा नम्बर लेख्नुहोस् वा जटिलताबाट बच्न यसलाई कण्ठ गर्नुहोस्। यस बाहेक तपाईलाई हाम्रो भिसा नम्बर खोज्नमा कुनै समस्या हुनु हुँदैन, यो प्राय: फरक फरक हुँदैन।
यो भिसा नम्बरले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ पुनर्स्थापित गर्नुहोस् तपाइँको भिसा मामला मा तपाइँ एक लामो लामो रहन चाहानुहुन्छ। अवश्य पनि, याद गर्नुहोस्, यदि तपाईंको यात्राको कारण परिवर्तन भयो भने यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले सम्बन्धित भिसाका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसोभए तपाईले केहि चिन्ता लिनु पर्दैन।
हामी आशा गर्दछौं कि भिसा भनेको के हो, यो के हो र तपाइँको नम्बर कसरी फेला पार्ने बारेमा जान्न हामीले तपाईंलाई मद्दत गरेको छ। शुभ यात्रा!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » सुझावहरू » मेरो भिसा नम्बर के हो?
EU बाट भिसाको प्रकार (B1 / B2) जुन मसँग बारकोड छ, मैले यसलाई पहिले नै स्क्यान गरेको छु र यो समान छ जुन बारकोडको दायाँपट्टि भिसाको अर्को छेउमा देखा पर्दछ, तर एक पल मा मैले यात्रा फाराममा लेख्छु जुन मलाई सोध्छन्, यसले मलाई चिन्न सक्दैन। यसले भन्छ कि यो एक पत्र हुनुपर्दछ followed अंक (#s) वा digit अंक (#s) र यो कागजातको तल्लो दायाँ भागमा अवस्थित छ र त्यो यही स्थान हो जुन मैले पहिले संकेत गरें र मैले गरें। फेला परेन, मेरो भिसा नम्बरको रूपमा पहिचान गरियो।